China Cross-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Evaporative Yakavharwa-redunhu Kutonhorera Mugadziri uye Mutengesi | Yubing
Kuyambuka-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Evaporative Yakavharwa-redunhu Kutonhorera
Seyakasimudzira dhizaini yemuchinjikwa kuyerera evaporative kutonhora shongwe, iyo tower fluid (mvura, mafuta kana propylene glycol) inoshandiswa kupa kutonhora iyo yakavharirwa mune coil uye haina kufumurwa yakananga kumhepo. Iyo coil inoshanda kupatsanura maitiro emvura kubva kunze kwemhepo, kuichengeta yakachena uye inosvibisa yemahara mune yakavharwa chiuno. Kunze kwekhoyili, kune mvura yekumwaya pamusoro peiyo coil uye inosanganiswa nemweya wekunze kuburitsa mweya unodziya kubva kushongwe inotonhorera kuenda mudenga sechikamu chemvura chinobuda. Mvura inotonhorera kunze kweiyo coil inotenderedzwa zvekare uye yoishandiswazve: iyo inotonhorera mvura inodzokera kumashure kusvika pakutanga kwegadziriro yekutora kupisa kwakawanda panguva yekupwa. Inobatsira kuchengetedza yakachena maitiro fluid iyo inoderedza iyo yekuchengetedza uye mashandiro emari.
Zvimiro zveyambuko-kuyerera yakavharwa wedunhu kutonhora shongwe:
Zviri nyore Kugadziriswa
Humanization dhizaini dhizaini ine pamusoro-saizi yekuwana musuwo (inokiyiwa) uye inokwana nzvimbo yemukati, vashandi vekuchengetedza vanogona kupinda mukati meshongwe kuti vaongorore nekuchengetedza mazuva ese zvisinei kuti chishandiso chiri kumhanya kana kuvhara-pasi.
Nekuda kwemhepo yakanyorova yakaoma uye kuyerera kwemvura inoyerera munzira inoenderana, pamusoro pebhubhu rakanyoroveswa nemvura yekupfira kudzivirira chero nzvimbo yakaoma iyo inotungamira pakuyera dhipoziti. Uye tembiricha yemvura yekusasa yakadzikira pane kuyera tembiricha iyo zvakare inoderedza kuyera.
Yakanaka kwazvo Heat Exchange Performance
Iyo yekuyambuka-kuyerera yakavharwa loop inotonhorera inotora musanganiswa tekinoroji yeese mairi coil uye yekuzadza kwekupisa kurambwa iyo yakagadziridza iwo ekupisa ekuchinjisa maficha ekuvandudza mashandiro ehurongwa.
ICE Evaporative kuyambuka-kuyerera yakavharwa yedunhu inotonhorera chimiro uye yakakosha zvikamu sumo:
Kufefetedza System (Feni)
Kunze axial fan ine kuita kwakanaka kwetatu-dziviriro dhizaini, yakashongedzwa nealuminium blade uye IP56, F kirasi inotyaira mota ine inofuridzira mweya iyo ichavhara mhepo uye kudzikisira kuvuza.
Yepamberi Yemvura Distribution Sisitimu
Nekuda kwemhepo uye kuyerera kwemvura munzira inoenderana, inokwanisa kuongorora nekuchengetedza panguva yekumhanya.
Yakagadzirwa mune yepamusoro simbi isina simbi 304 yakave yakarongedzwa uye yakapfuura katatu nguva 2.5Mpa kuyerwa kuyerwa kuverengera kuita.
Isarudzo yekusarudzika yekurapa mvura.
Yakagadzirwa uye yakagadzirwa nePV kudzikisa kupisa tembiricha yemvura inozodzivirira chiyero uye kuzadza kwacho kunowedzera mashandiro ehurongwa kuburikidza nekuderedza kunwa kwemvura neiri nani kupisa kuchinjisa kuita.
ICE inotonhorera yakashongedzwa nemishini yakavharwa centrifugal pombi.
Dhizaini dhizaini (inorerekera yakanangana nekusvibisa kubuda) uye iyo simbi isina simbi strainer ichavandudza kufashukira uye kusvibiswa kubuda panguva imwe chete kunobvisa zvinosvibisa uye tsvina mubheseni.
Pashure: Yakatemerwa Dhaidhi Kutonhora Towers neRectangular Chitarisiko
Zvadaro: Counter-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Towers / Evaporative Yakavharwa-redunhu Kutonhorera
Technical Parameter yeCross-kuyerera Yakavharwa-redunhu Kutonhora Shongwe
Inlet / nzira yekubuda pombi saizi
Yakavharwa redunhu rinotonhorera
Yakavharwa Kutonhora Shongwe
Yakavharwa-wedunhu Kutonhora Shongwe
Yakavharwa-chiuno Kutonhora Shongwe
kuyambuka-kuyerera yakavharwa redunhu inotonhorera
Kuyambuka-kuyerera Yakavharwa Circuit Kutonhora Shongwe
Evaporative yakavharwa inotonhorera
Evaporative Yakavharwa inotonhorera nhare
Mvura-yakatonhorera yakavharwa chiuno kutonhora shongwe